Mahatsiaro ho foana ao anatiny: Antony Maninona + Inona no hatao amin'izany - An-Tsaina
Mahatsiaro ho foana ao anatiny: Antony Maninona + Inona no hatao amin'izany
Ny fahatsapana ny fahabangana dia miavaka indrindra amin'ny fihetsem-po izay tokony ho tsapan'ny olona iray. Mipetraka toy ny loaka mainty ao anaty tratranao izy io, tsy misy akora heverina fa eo.
Manala ny fihetseham-po, ny fahalianana, ny faniriana, ny fanantenana, ny nofinofy ary mety hihoatra ny zavatra antenaintsika avy amin'ny fihetseham-po ratsy aza. Ny fahabangana dia afaka mihinana alahelo mora foana toy ny fahasambarana sy fanantenana, mamela anao hahatsiaro ho momba sy foana.
Ny fiantsoana ny fahabangana fahatsapana ratsy dia mety tsy hahatsapa ho marina, satria fahatsapana ho tsy misy dikany izany. Azo antoka fa tsy mahatsapa tsara izany, fa mety tsy hahatsapa ho ratsy ihany koa. Tsy eo fotsiny.
Mety hahatsapa ianao fa tsy misy dikany, mankaleo ny zava-drehetra, na hoe tsy afaka mahatsapa karazana fihetseham-po mahery ianao.
Na eo aza izany tsy eo izany, ny fahatsapana fa tsy misy dia fihetsem-po mampita zavatra aminao momba ny tenanao, ny fahasalamanao, na ny fomba fiainanao.
Ny olombelona dia zavaboary mivoatra amin'ny fientanam-pihetseham-po sy ny hery entin'izy ireo. Ny tsy fisian'io angovo io dia mety hamotika tokoa rehefa miaina miaraka aminy matetika ianao na mbola tsy niaina izany. Raha mbola tsy nahatsapa fahabangana ianao hatrizay, dia mety hampatahotra anao ny tsy mahatsapa na inona na inona rehefa heverina fa mahatsapa ny zava-drehetra ianao, na farafaharatsiny zavatra iray.
Misafidy ny hiatrika an'io fahabangana io amin'ny fomba samihafa ny olona, ​​maro amin'izy ireo no tsy salama. Mety hiezaka ny hameno ity lavaka ity amin'ny firaisana ara-nofo, vola, mpanjifa, lalao video, fanelingelenana, zava-mahadomelina, alikaola ary amin'ny tranga mihoa-pampana isika - mandratra tena ary mamono tena mihitsy aza. Rehefa dinihina tokoa, ny fanaintainana ara-batana farafaharatsiny fampahatsiahivana mbola velona isika, mbola afaka mahatsapa… zavatra.
Na inona na inona mihitsy.
Fa tsy voatery ho toy izany. Ny fahabangana dia famantarana iray manondro olana lehibe kokoa izay mety tsy tsapan'ilay olona niainany.
Tsy olana aretin-tsaina foana koa izany olana izany. Misy toe-javatra samihafa sy olana mety hiteraka izany fahatsapana fahabangana izany.
Ny antony mahatonga ny fahabangana dia hibaiko karazana fihetsika mety hanampy hanamaivana izany fahatsapana izany. Hodinihintsika ato amin'ity lahatsoratra ity ny sasany amin'ireo antony iraisana sy ny sasany soso-kevitra vahaolana hamahana izany fahatsapana poakaty izany.
Ny banga dia mety ho zavatra sarotra atrehana samirery. Olana iray izay mety hiatrehana tsara indrindra amin'ny mpanolo-tsaina amin'ny fahasalamana ara-tsaina, indrindra raha manana aretin-tsaina mety hiteraka karazana fahatsapana ireo ianao. Aza misalasala mitady fanampiana matihanina, indrindra raha sendra fahabangana maharitra ianao.
Inona no mahatonga ny fahatsapana fahabangana?
1. Tsy fisian'ny tanjona.
Betsaka ny olona miady amin'ny fahitana tanjona ao amin'ity tontolon'ny malalaka azo atao tsy misy fetra ity.
Inona no ataoko amin'ny fiainako? Misy dikany ve izany? Inona no tokony hataoko amin'ny tenako?
Ny tahotra misy izay tsy misy tanjona dia afaka mampirongatra ny fahabangana satria toa tsy misy zavatra tokony hananantsika isika. Ny olona sasany manandrana mameno ny fahabangana amin'ny fihetsiny, toy ny fanaovana asa an-tsitrapo na ny fanaovana asa any amin'ny saha izay afaka manampy ny olona.
Ny fikasana tanjona dia zavatra mahaliana satria mety tsy vonona ny hahita tanjona manokana ianao. Ary tsy midika izany fa amin'ny hevitsika tsy fantatra, lahatra. Fa kosa, mety hisy ny fiainana niainanao tokony hanananao sy ny asa tokony hataonao alohan'ny ahafahan'ny tanjona manantanteraka tsindrio miaraka aminao.
Angamba ny maha ray aman-dreny anao dia manolotra anao karazana fanatanterahana izay hameno izany fahabangana izany, saingy tsy voatery ho fantatrao izany raha tsy aorian'ny fanananao zanaka. Na mety zavatra mifantoka kokoa amin'ny asa izany. Angamba ny fonao sy ny sainao dia mifanaraka amin'ny hoe eny ambonin'ny ranomasina, zavatra mety tsy fantatrao mandra-pikatsoanao amin'ny sambo.
Mety hahatsapa ho misarika ho amin'ny zavatra mety manolotra fahafaham-po anao ianao, toy ny fahalianana maharitra na zavatra iray izay tena miresaka aminao. Mety hanampy anao hahita làlana izany.
2. Alahelo, fahafatesan'ny olon-tiana.
Ny alahelo dia fihetsika ara-pihetseham-po voajanahary amin'ny fahafatesan'ny olon-tiana iray. Indraindray isika dia afaka mahita ny fiavian'ny farany ary manam-potoana hiomanana ara-tsaina sy ara-pihetseham-po amin'izany. Amin'ny fotoana hafa dia mety hamoy olon-tiana tsy ampoizina isika. Misy be foana ny fihetsem-po hiatrehana ny fahafatesany, na dia tsy eo noho eo aza izany.
famantarana fa safidy ianao fa tsy laharam-pahamehana
Betsaka ny olona mitodika any modely alahelo mba hanandramana tsara handroso sy hahatakatra ny alahelon'izy ireo nefa tsy tena mahatakatra ireo maodely. Ny 'Dingana Dimy amin'ny alahelo' dia maodely iray tahaka izany. Ny mazàna diso ny olona momba ireo maodely ireo dia ny tsy fitsipika mafy sy haingana. Tsy azo atao ny manosika ny haben'ny fihetsem-po ho anaty boaty tery toy izany, zava-misy resahin'ireo mpamorona modely toy izany.
Izy ireo dia mety ho torolàlana amin'ny ankapobeny. Misy dingana mety hiainanao na tsia. Ny olona sasany dia miaina dingana maromaro amin'ny fotoana iray. Ny sasany mivezivezy amin'ny dingana samihafa rehefa misaona ny olon-tiany izy ireo.
Betsaka amin'ireo maodely no miresaka momba ny “tsy fahamatorana” na “fandavana” satria tafiditra amin'ny fizotran'ny alahelo ary mety hanazava ny fahabangana tsapanao izany. Mety ho fanandraman-javatra sarotra izany satria, ara-dalàna, fantatrao fa mety tokony hahatsapa alahelo miaraka amina fihetseham-po hafa maro ianao, saingy tsy manao izany ary sarotra ny mihavana.
Ny alahelo sy ny alahelo dia sarotra kokoa noho ny fisehoany. Izany no mahatonga ny hevitra tsara ny mitady mpanolo-tsaina alahelo. Ny manam-pahaizana momba ny alahelo dia mety afaka manampy anao amin'ny fahatsapana poakaty sy alahelo maharitra.
3. Fisorohana zava-mahadomelina sy alikaola.
Betsaka ny olona mitodika any amin'ny zava-mahadomelina sy alikaola hiatrehana ny zava-manahirana amin'ny fiainany. Tsy misy maharatsy azy ny misotro toaka na mampiasa akora ara-dalàna. Tena manomboka miakatra ny olana rehefa ampiasaina be loatra ireo zavatra ireo na toy ny fomba iray hanampiana ny olona hampihena ny fihetseham-pony.
Ny famenoana ny banga amin'ny fahabangana amin'ny zavatra iray dia mety hiteraka fiankinan-doha, fifandraisana ratsy kokoa amin'ny olon-kafa, famoizana asa, ary fanovana toe-javatra iainana.
Ny fanararaotana zava-mahadomelina dia mety hitarika amin'ny olana ara-pahasalamana na ara-tsaina samy hafa ihany koa, hafa noho ny fikorontanana amin'ny fidorohana zava-mahadomelina, toy ny miteraka aretina saina miafina na aretin'aty. Mety hanaratsy kokoa ny olana ara-pahasalamana mialoha koa izany.
Ny alikaola dia fantatra fa misy fiatraikany amin'ny olona voan'ny aretin-tsaina, toy ny fahaketrahana sy ny aretin'ny bipolar, izay mafy lavitra noho ny olona tsy manana. Hafa ihany ny fiasan'izy ireo ao an-tsainy ary mety hiteraka tsy fahatokisan-tena ara-pihetseham-po ary hiharatsy ny fahaketrahana.
Ny iray amin'ireo antony ampiasain'ny olona akora dia ny fanampiana azy ireo hiaina zavatra andalovan'izy ireo. Mino izy ireo fa manampy azy ireo izany satria mampitony azy ireo amin'izao fotoana izao. Ny olana dia ny fampiasana zava-mahadomelina lava dia mety hisy fiatraikany maharitra mety hanimba ny olana ara-pahasalamana na hiteraka fiovana vaovao amin'ny ho avy.
4. Faneriterena maharitra.
Ny olombelona dia tsy miorina hiatrehana ny adin-tsaina maharitra. Ny fihenjanana dia mahatonga ny hormonina samihafa hamokarana hanampiana olona iray hiatrika io toe-javatra mampiady saina eo noho eo io, saingy ireo hormonina ireo dia mety hiteraka olana lehibe kokoa rehefa lava ny fisiany.
Ny fihenjanana maharitra dia mety miteraka famoifoizana, fanahiana ary amin'ny tranga sasany, PTSD. Ireo tafavoaka velona amin'ny fanararaotana ao an-tokantrano, fanararaotana zaza tsy ampy taona ary fahantrana dia mety hiteraka PTSD Complex, izay vokatry ny tsy fialan-tsasatra mihitsy tamin'ny toe-javatra niainan'izy ireo.
Ny fanalavirana ny adin-tsaina maharitra na ny fanovana toe-piainana dia mety hanampy. Fa raha mitombo ny olan'ny fahasalamana ara-tsaina dia mitaky mpitsabo aretin-tsaina voaofana mba hositranina sy ho sitrana.
5. Olana amin'ny fianakaviana, namana, na fifandraisana.
Ny olona manodidina antsika dia misy akony lehibe amin'ny toe-panahintsika sy ny toe-panahintsika. Ny fahabangana dia mety hateraky ny fifandraisana mikorontana, ny fisarahan-toerana na ny fihenjanana ateraky ny olon-tiantsika indraindray. Mihasarotra kokoa ny mitazona ny fahasalamanao manokana rehefa mijaly na mandray fanapahan-kevitra ratsy ny olon-tianao.
Ny fifandraisana am-pitiavana dia mety hitondra fihenjanana fanampiny isan-karazany izay mety hampirongatra izany fahabangana izany. Angamba manana olana ny mpivady fa tsy miresaka. Mety tsy hifankahazo am-po amin'ny fianakavian'izy ireo ianao, izay loharanon'ny fihenjanana sy fahasahiranana. Mety hihena koa ilay fifandraisana ary eo am-pamaranana izy io. Io karazan'aretam-po io rehefa tsy mandeha ny zavatra dia mety handrehitra ny negativa foana.
Ireo olana ireo dia mety mila alamina manokana na miaraka amin'ny fanampian'ny mpanolotsaina momba ny fifandraisana aza. Mazava ho azy, misy ihany koa ny olana sasany izay tsy afaka amboarinao fotsiny, ary mety mila mandinika indray ianao raha salama ny fifandraisana na tsia hitoeranao ao.
6. Fampiasana haino aman-jery sosialy be loatra.
Tao anatin'izay taona vitsy lasa izay dia manomboka miharihary ny voka-dratsin'ny fampiasana media sosialy be loatra. Tototry ny vaovao ratsy sy ny vato misongadin'ny fiainan'ny hafa ny tsy fandriam-pahalemana, fikorontanan-toetra, fahaketrahana, tebiteby, ary olana maro hafa.
Hita fa tsy fifangaroana tsara izany rehefa mety tsy latsaka ny fiainanao noho ny fahalavorariana izay safidin'ny olona maro mampiasa media sosialy aseho.
Izany akory tsy manisa ireo ampahany mamotika amin'ny media sosialy. Ny orinasan-tserasera dia mampiditra ny rafitra valisoa dopamine olombelona sy ny tahotra ny tsy fivoahana mba hitazomana anao hikorisa amin'ny fampiroboroboana sy fanangonana tianao.
Toy ny zava-drehetra, ny media sosialy dia mila ampiasaina amin'ny antonony raha io no hampiasaina. Ny be loatra dia tsy salama ara-tsaina ary afaka miteraka fahatsapana ratsy toy ny fahabangana.
7. Lalao media sy video be loatra.
Sahala amin'ny media sosialy, ny fampiasana haino aman-jery tafahoatra dia afaka manao zavatra mitovy amin'izany.
Firy na vazivazy na referansa efa henonao momba ny olona nijery vanim-potoana fampisehoana amin'ny serivisy mivantana? Tsy mahasalama izany karazana fitondran-tena izany satria mamela antsika hivoaka amin'ny zavatra jerentsika fa tsy hiatrika ny fiainana manodidina antsika.
Io karazana fihetsika io dia manamora ny fihetseham-po ratsy toa ny fahabangana, saingy miteraka fahasarotana fanampiny eo amin'ny fiainana izany satria mety tsy mifantoka amin'ny andraikitsika isika.
Mihetsika toy izany koa ny lalao video. Mora tokoa ny tafiditra ao anaty lalao video natao ho filentehan'ny fotoana mba hahatonga anao hirotsaka sy hilalaovanao matetika. MMORPGs (Lalao Massive Multiplayer Online RolePlaying Games) sy MOBA (Multiplayer Online Battle Arenas) dia karazana lalao namboarina ho treadills izay tsy mifarana.
Azo antoka, fomba mahafinaritra izy ireo handaniana fotoana vitsivitsy. Fa ny fampiasana lalao video ho fialana amin'ny tena fiainana dia mety hiteraka fiankinan-doha amin'ny lalao video amin'ny fomba mitovy amin'ny fiankinan-doha amin'ny filokana. Mahazo mihidy amin'ny tadim-bola azo tsapain-tanana ianao ary miverimberina miverina hatrany hatrany.
Tsy misy maharatsy an'ireo zavatra ireo amin'ny antonony, fa ny olona kosa mila mampihony onony mba tsy hiharatsy ny fahasalamany.
8. Fiovan'ny fiainana sy fiovana lehibe.
Ny fiovana eo amin'ny fiainana sy ny tetezamita dia mitondra fihenjanana izay mety ho sarotra iatrehana izany. Indraindray ireo dia kasaina hatao, ary indraindray dia atosiky ny fahaverezan'ny asa, ny fifaranan'ny fifandraisana, ny fanovana trano, na ny tranga matotra hafa isika.
Ara-dalàna ny adin-tsaina sy ny tsy mahazo aina rehefa mandalo tetezamita toy izao, indrindra raha tsy azonao antoka izay hitarika ny hoavinao.
Ny maha-mavesatra an'ireo fanovana ireo dia mety hahatonga ny ati-dohanao te hidina sy hisoroka ny adin-tsaina. Ireo fahatsapana ireo dia mety hahitana fahabangana.
Mety ho hitanao fa mandalo ny fahabangana rehefa voavaha ny toe-javatra ary miroso amin'ny zavatra hafa ianao.
Eny, mety very asa ianao, saingy nametraka fangatahana sasany ary nitafa nilahatra. Tapitra ny fifandraisana, ary mampalahelo izany, fa misy foana ny fotoana mahita fotoana vaovao sy fitiavana tsara kokoa izay mifanaraka amin'ny olona itombohanao.
Handalo ireo tetezamita ireo, dia hahita ny lalanao ianao. Indraindray mila manana faharetana kely fotsiny isika, rehefa mirehitra manodidina antsika ny fiainantsika.
9. Tanjona sy nenina tsy tontosa.
Vitsy ny lanja mavesatra noho ny fanenenana. Ny olon-drehetra dia samy manana ny zavatra iriny mba ho nataony tamin'ny fomba hafa na nataony mihitsy. Indraindray ny olona dia manana mihoatra ny iray na roa amin'ireo fanenenana miangona mangina ao an-tsainy.
Ny fijanonana amin'ny lasa sy ny eritreritra ny zavatra mety nisy dia mety hiteraka fihetseham-po ratsy toa ny alahelo, nenina, alahelo ary fahabangana.
Tsy voatery hanasitrana ny ratra rehetra ny fotoana. Indraindray, mampifangaro azy ireo fotsiny izany ary mampitombo azy ireo raha tsy nahita fomba hiatrehana azy ireo mavitrika sy hanasitrana azy ireo isika.
Mety hitaky ny fanampian'ny mpanolotsaina izany mba hahitana ny fanekena ny amin'ny inona ary tsy tonga mba hahafahanao manantena zavatra tsara kokoa ho an'ny ankehitriny sy ny ho avy.
10. Aza miraharaha ny fahasalamana ara-panahy.
Ny fahasalamana ara-panahy dia tsy midika hoe fivavahana na karazana fivavahana ara-panahy. Fa kosa, fehezan-teny izay ampiasain'ny vondrom-pitsaboana hamaritana ireo endrika tsy azo tsapain-tànan'ny tena ara-pientanam-po.
Ny fahasalamana ara-panahy dia mandrakotra zavatra izay mahatonga antsika hahatsapa ho salama, faly, tsara ary feno.
Ny olona sasany dia mampiasa ny fivavahana mba hahitana izany fahatsapana izany, saingy azo jerena ihany koa amin'ny asa an-tsitrapo, mamorona zavakanto, manao soa ho an'ny olon-kafa, mikolokolo fifandraisana feno fitiavana, mivoaka amin'ny natiora ary zavatra maro hafa.
Miaina fiainana be atao isika izay misy zavatra tokony hatao foana. Toa tsy dia misy ora firy ao anatin'ny iray andro hanatanterahana ny zava-drehetra. Tsy mamela fotoana firy amin'ny fialamboly sy fanatanterahana ny lafiny ara-panahintsika izany raha tsy hoe mamorona fotoana hilalaovana isika.
Ny fiezahana ho eo amin'ny fikosoham-bary tsy miato tsy misy fitsaharana, fialan-tsasatra na lalao dia fomba azo antoka mandoro , fahaketrahana amin'ny solika ary miteraka fahabangana.
11. Olana ara-pahasalamana na ara-tsaina.
Olana ara-pahasalamana sy ara-tsaina maro no mety hiteraka fahatsapana fahabangana - fikorontanan'ny toe-tsaina, fikorontanan'ny toetran'ny olona manam-petra, fikorontanana amin'ny fihinanana sakafo, tsy fahasalamana amin'ny vatana, schizophrenia - ary aretina ara-batana izay misy fiantraikany amin'ny saintsika sy ny vatantsika.
Raha toa tsy misy amin'ny ankapobeny ny zavatra tsy mandeha amin'ny fiainanao ary mahatsiaro ho foana ianao dia tsara ny manatona dokotera momba ny olana. Ny fahabangana dia mety ho mariky ny aretina ara-batana fa tsy aretin-tsaina.
Ahoana no hiatrehako ny fahabangana vetivety?
Araka ny efa nodinihintsika tato amin'ity lahatsoratra ity, ny ankamaroan'ny olana izay miteraka fahabangana dia mety ho tetikasa lava kokoa izay mila karazana fanampiana matihanina. Vaovao mahasoa izany amin'ny fanovana ny fiainana maharitra. Na izany aza, tsy voatery hanampy toy izany ianao rehefa tototry ny fahatsapana amin'izao fotoana izao.
Andao hijery fomba vitsivitsy handehanana amin'ireo fotoana ambany ireo mandra-pahazoanao ny fanampiana matihanina mety ilainao.
Mankanesa any amin'ny tambajotranao mpanohana.
Mety ho afaka mahita fanohanana amin'ireo namanao sy olon-tianao ianao rehefa miaina an'ity ambany ity.
Na izany aza tsy ny olona rehetra no tsara vintana fa manana olona toy izany amin'ny fiainany. Mety hahita fanohanana ihany koa ianao amin'ny alàlan'ny loharanom-baovao an-tserasera toy ny vondrona media sosialy na koa mpanolotsaina an-tserasera hanome fanohanana vonjimaika.
Mampihetsi-po ny te hikorontana amin'ny tena rehefa mahatsapa poakaty, fa manandrana tsy. Manery ny tenanao hanatratra araka izay azonao atao amin'ny olona fantatrao fa azonao atokisana.
Tsara ny manao io karazana fandaminana io mialoha ny fotoana miaraka amin'ny namana na mpanohana manokana. Anontanio izy ireo raha vonona hanome anao fanampiana izy ireo amin'ny fotoananao ambany, mba hahafantaran'izy ireo rehefa misy zava-manahirana. Safidy tsara kokoa io noho ny fitifirana hafatra sy ny fihainoana tsy misy olona.
Soraty ny andronao sy ny fihetsem-ponao.
Fitaovana mahery vaika ny fitetezam-paritany rehefa ampiasaina tsara. Mety hanampy amin'ny fanoratana momba ny zava-niseho tamin'ny androny, ny zava-nitranga nahatonga ny fahabangana, ary hijery ny fihetseham-pon'ny hetsika.
Ny banga dia mety ho mariky ny fiezahana hanafoana ny fihetsem-po koa, izay ilaina indraindray mba hamakivakiana ny tontolo andro. Rehefa dinihina tokoa, tsy afaka mandany ny andronao mitomany any am-piasana ianao, tena.
Ny azonao atao dia ny miverina ary avereno jerena ireo fihetsem-po ireo any aoriana rehefa manana fotoana ianao sy ny fiainanao manokana.
Betsaka ny hafatra tsy tsara fanahy raha 'mitsentsitra azy' ary mamakivaky azy, izay ilaina indraindray. Ny tsy miraharaha izany karazana toe-tsaina izany dia ny ahafahanao miverina mijery ireo fahatsapana ireo avy eo.
Ny ankamaroan'ny olona izay manidy ny fihetsem-pony hiatrika izany dia tsy miverina mijery ary avy eo. Manome fotoana ireo fihetsem-po ireo hanjary olana lehibe kokoa izay mamorona sy mitazona ny fahabangana.
Diniho ny tanjonao sy ny zava-kendrenao.
Manana tanjona ve ianao? Raha tsy izany dia tokony hametraka tanjona fohy sy lavitra ianao. Ny fahafantarana fa manana zavatra iasanao ianao dia afaka manampy amin'ny fanombohana dingana ara-pientanam-po manodidina ireo tanjona ireo.
Ny fahaizana manosika amin'ny fanantenana na fanekena ny zava-bita taloha dia mety ho ampy hamelana jiro mandritra ny fahabangana kely.
Tazomy ireo rakitsoratra na diarinao momba ny tanjonao, ny fomba ahatratraranao izany ary ny zavatra antenainao hialana amin'izy ireo. Mahasoa ny mijery ny jery todika mba hahitanao hoe tonga aiza ianao rehefa miaina fotoana sarotra.
Ataovy ireo zavatra tianao taloha.
Ny famoizam-po, ny fahabangana ary ny fahatsapana manimba manodidina ireo zavatra ireo dia mety hampitsahatra ny fahafinaretantsika amin'ireo hetsika tiantsika indrindra.
Na dia tsy afaka mankafy azy ireo amin'izao fotoana izao aza ianao dia mety hanampy ny miditra ao aminy ihany. Fotoana ahafahana mifandray indray amin'ny fahasambarana sy fifaliana tsy hanananao raha toa ianao ka mivoaka amin'ny hetsika tsy misy sainina na tsy feno.
Ataovy amin'ny antonony sy am-piheverana ireo zavatra ireo. Miezaha mieritreritra ny zavatra mahafaly anao amin'ilay hetsika.
Miezaha hisoroka ireo hetsika azonao zahana mora foana, toy ny fijerena binge ny seho tianao indrindra. Mety hivadika ho hetsika tsy misy dikany loatra izany izay mandrehitra ny fahabangana fa tsy miady aminy.
Mangataha fanampiana matihanina.
Mitadiava fanampiana matihanina raha mahatsapa fahabangana maharitra ianao. Tsy normal izy ireo, ary tsy fomba mahasalama hiaina ny fiainanao.
Arakaraky ny maharary azy no vao mainka sarotra ny miatrika sy manasitrana. Raha sahirana ianao na toa tsy mahita vahaolana samirery dia tsy misy mahamenatra ny manatona vonjy amin'ny matihanina.
Mbola tsy azonao antoka hoe maninona ianao no mahatsiaro ho foana ao anaty na inona no hatao amin'izany? Miresaha amin'ny mpitsabo iray androany izay afaka mitarika anao amin'ny fizotrany. Tsindrio fotsiny eto raha hifandray amin'ny iray.
Fahakiviana ara-pientanam-po: Antony, soritr'aretina ary fitsaboana
Ahoana no hikarakaranao indray rehefa tsy miraharaha zavatra hafa fotsiny ianao
Fahakiviana misy ankehitriny: Inona izany ary ahoana no fomba handresena azy
Fa maninona aho no tsy afaka mitomany intsony? Ary Ahoana ny fomba hahatongavan'ny ranomaso
Paikady fikarakarana tena ara-pihetseham-po 8: Tandremo ny fihetseham-ponao
25 Antony mahatonga anao tsy sambatra: zavatra mahatonga anao hahatsapa fahantrana
7 Antony mahatonga ny fitadiavana fanantenana ho an'ny ho avy no zava-dehibe tokoa
Zavatra 7 tokony hatao rehefa tsy misy mahasambatra anao
heveriko fa nilatsaka taminy aho
ahoana no ilazana raha liana izy
famantarana ny daty voalohany nandeha tsara
ahoana no hilazana raha maniry mihoatra ny lahy sy ny vavy izy
ny fomba hialana amin'ny famadihana
maninona aho no tsy liana amin'ny zavatra rehetra